November 29, 2012ကာတွန်း – စောငို
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Cartoon Box, စောငို	One Response to အချိန်နဲ့နေ ..အချိန်နဲ့အိပ် မောင်ပျာလောင် on November 29, 2012 at 11:27 am နောက်ကြသွားပြီ ဆရာကီး၊ အချိန်နဲ့ ရတဲ့ခလေး ချိုမိုင်မိုင်တောင်ကနေပြီ။ ဒီအထဲ စစ်ဗိုလ်ကီးတွေရဲ့ မယားနဲ့ တမီးတွေလည်း အဆစ်ထဲ့ပေးပါလား။ ၀လည်းပျော်တာဘဲ လူ့ မယားတွေလည်းပျော်တာဘဲ။ အကီးမယားတွေတော့ စက်တပ်ထားတာကြောင့် ဗိုလ်ကီး လျှာနဲ့ လာမတို့ နဲ့ နော် – လျှာပြတ်သွားလိမ့်မယ်။
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများလောင်စာဆီမှောင်ခိုလုပ်ငန်း ဧရာဝတီတ၀ှမ်း ပြန့်နှံ့ခြစားနေပြီ ပဲလှော်ကြားကဆား - medical doctors in Burma
စာပဒေသာ ကောက်စာများAshin Wirathu - အရှင်ဝီရသူ (မစုိုးရိမ်)၏ သမိုင်းတရားခံ အီးဘုတ်စာအုပ် ထွက်ပါပြီ အောင်ဒင် - ရုပ်ရှင်ရုံ
By admin ၂၀၁၅ နှစ်သစ်အတွက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ – မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အခု...Read more » Recent Commentshla myint. on ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)Catwoman on ငြိမ်းချမ်းအေး – ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့စိတ်Ashinwin on ကာတွန်းအောင်မော် – သူတို့အထက်ရဲ့ အထက်က ကောင်Dr. Zhivaka(Kambawza) on မောင်တူး – သက်ရှိပန်းချီ – အပိုင်း (၁၇)aye kyaw on မောင်သာမန် – အင်ဂိုလာ၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနဲ့ မြန်မာကမ်းလွန်ရေနံသင်္ဘောလုပ်ငန်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ